Posted by ညီရဲသစ် at 08:48
မဒမ်ကိုး 1 November 2011 at 09:25
ရဲရဲသာလွမ်းပါလေး)ရဲရဲကြီးသာ ကြည့်ပစ်လိုက်စမ်းပါး)
ဒိုးကန် တာဝန်ယူပါတယ် ..ထွက်ပြေးဖို့း)
အမယ် အမယ် ဘလက်တို့ များ ဖွဲ့ နွဲ့ နေလိ်ုက်တာ
ဘယ်လို တိတ်တခိုးတဲ့ ခွိခွိ
မဝံတဝံတွေ မရဲတရဲတွေလုပ်မနေနဲ့ဘလက် ချသာချ ရေနွေးကြမ်းကိုပြောတာ
းO အဲဟုတ်ပါဖူး ကော်ဖီကိုပြောတာ....းD
Maung Myo 1 November 2011 at 09:50
ကဗျာလေးက တကယ်ကို ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့ ကောင်လေးကိုမြင်ယောင်သွားစေတယ်း)
Candy 1 November 2011 at 10:50
အစ်ကိုက ကဗျာရေးလည်း ကောင်းတာပဲ..
ရဲရဲကြည့် .. ရဲရဲလှမ်း... ရဲရဲချစ်... ရဲရဲလွမ်းပါ အစ်ကိုရ..
ဒီအစ်ကို မရိုးသားတော့ဘူး.. ငှဲ ငှဲ ငှဲ :P
နေ၀သန် 1 November 2011 at 10:57
ခင်ညာ... ၀က်ဝံတွေပဲ မြင်ယောင်သွားတယ်.. ဟိဟိ... နောက်တာပါ.. အောက်ကမြင့်ထည့်ဖတ်သွားတယ်.. တော်တော့်ကို နူးညံ့တဲ့ကဗျာလေးပါ..း))
ကိုဇော် 1 November 2011 at 14:38
ဆရာ မောင်စ်ိန်ဝင် ( ပုတီးကုန်း ) များလေလားပဲ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 1 November 2011 at 14:55
တိတ်တခိုးလေးချစ် တိတ်တခိုးလေး လွမ်းနေတယ်ပေါ့။
ကြွေးရှင်ဆီလည်း ခြေလှမ်းရဲရဲ မလျှောက်ရဲ
ကဗျာကို ဖျက်ပြီး ခံစားသွားတာ မဟုတ်ဘူးနော်
ဖြစ်နေတာကို ပြောပြတာ. တိုက်ဆိုင်သွားလို့ :P
မြသွေးနီ 1 November 2011 at 17:01
ညိမ်းနိုင် 1 November 2011 at 17:54
မချေးဝံ ချေးဝံနဲ့ ချေးပါရစေလား......ပိုက်ဆံ ငါးဆယ်လောက်.....:)))
စံပယ်ချို 1 November 2011 at 18:06
Anonymous 1 November 2011 at 19:08
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 1 November 2011 at 20:02
လွမ်းရတာတောင် မရဲတရဲ ...:):)
mstint2November 2011 at 07:17
ဆန္ဒရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်ဖွင့်ပြလိုက်ပါ မောင်ညီရဲရေ။
ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျလို့ နောင်တဆိုတာ မရခင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေနော်။
Anonymous2November 2011 at 21:20
အမလေး....ဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ တိတ်တခိုးတွေ ဘာတွေလုပ်နေရသေးတယ်....တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ကြိုက်ကြိုက်တယ်ပေါ့.... :P
blackroze3November 2011 at 00:37
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)7November 2011 at 19:21
ကဗျာချစ်သောကျွန်တော် ဖတ်ဝံ့၍ ဖတ်သွားသည်။
8Yar 8 November 2011 at 10:09
ရဲရဲသာ ဝံ လိုက်ပါ အဲလေ... ဝံ့ လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေလား။ ဟီး... ခင်လို့ နောက်တာနော်။ ကဗျာလေးက ချစ်စရာလေး ကိုညီရေ။ ပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့9November 2011 at 01:07
အနေအစား မတတ်တဲ့ ဒီပါးစပ်
သူခိုးကြီးည တစ်ည (၂)